DEG DEG: Gudoomiyihii G. Nugaal oo goor dhaw u geeriyooday dhaawacii Qaraxa.
March 29, 2020 NEWS 10
GAROOWE(P-TIMES)- Gudoomiyihii gobalka Nugaal Xassan Gujir ayaa geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax Ismiidaamin ah oo galabtay lagula beegsaday magaalada Garoowe.
Gudoomiyaha ayaa u geeriyoday dhaawacan, ka dib markii ay dhakhaatiirtu kuguuleysteen in ay kasoo saaraan firiro madaxa ka galay.
Marxuum Gujir ayaa kamid ahaa dadka dadaalka badan galiyey horumarka gobalka Nugaal, wuxuuna qeyb ka ahaa Mashaariicda gobalka.
Dawladda ayaa Tacsi u dirtay qoyska iyo Qaraabada iyo Shacabka Puntland, waxayna balan qaaday in cadaaladda lahorkeeni doono dhagarqabayaasha
Guddoomiyahii Gobolka Nugaal Xasan Gujir Ilaah u naxariisto waxaa dilkiisa laga abuubuley hargeysa. Waxaa dishey gacan ka xaq daran.
Guddoomiyahii Gobolka Nugaal Xasan Gujir Ilaah u naxariisto waxaa dilkiisa laga soo abuubuley hargeysa. Waxaa dishey gacan ka xaq daran.
Allaha u naxariisto Aamiin
gudoomiyaha illaahay ha u naxariisto,wakhtigiisii baa dhamaaday
ABDIRIZAK ,qof xanuunsan baad tahay oo somaliland cuqdad u qaba,waynu wada ognahay cida dadka somaliyeed sidan oo kale u xasuuqda oo waa al-shabaab,maxaad wadan kale oo deriskaaga ah denbiga u saaraysaa,dadkaaga ku boori sidaad dhiig yacabka isaga qaban lahaydeen ,intaad dhibkaaga gondahaaga yaal wadan kale saaraysid ,,,,,,,,,HARGEYSA….
Waa in Puntland u aarguddaa guddoomiyahii Garowe Gujir Allah u naxariisto.
Puntland waa in ay la saaxiibtaa Alshabaab sida Somaliland saaxiibka ula tahay.
Alshabaab waa urur mafio ah lacag ku shaqeysta oo la kireysto sidaas darteed waa in Puntland adeegsataa Alshabaab.
Puntland hurdada ha ka kacdo shaqadeedana ha qabsato..
Waa in sarkaal sare oo Somaliland ah loogu aaraa Gujir.
Shirqoolada lagulaynayo haldoorka harti idoor hargaysa kadanbeya.
Dilaalka kadhaca bosasaso iyo kan garowe.
Iyo kuwa laascanood wa qorshe ay somalegan belaha jegaanta .
Wana in laqado talabo argudasho lana laayo oo logu tago caynabo iyo celafwayn iyo hargaysa.
Sida aan hubo weerarkan Puntland qalbigeeda laga soo hujuumay waxba loo la ma hadhin xaqiiqdii. Dhacdadani waxay Puntland uga dhigan tahay 911-kii Mareykanka ka dhacay. Waxa aynu filnaa ba waa fal celin lama illaawaan ah iyo in la joogo xilligii lagu kala bixi lahaa. In ay Villa Garoowe aargudan doonto iyo in kale waa laga war sugayaa.
In aanay mintidiinta SNM Puntland u libiqsanaynin shaki kuma jiro xaqiiqdii laakiin raganimada iyo fariidnimada Hargeysa heerkaas ku soo simay maxaa Puntland u diiday weeye su’aasha meeshan ku mudan. Waxaa u diiday saddex nusqaamood aniga qiyaastayda:
1. Dhayalsigii ay madaxda Puntland nacabkeeda soo dhagrayay dhayalsanayeen oo ka indhasaabay in ay ciidamadeeda tayeeyaan oo awood laga baqo ka soo saaraan.
2. Iska yeelyeelka Soomaali jeceylka ee habaca weyn kaga riday taxadarkii iyo foojignaantii ku waajibka ahaa ee dhanka sirdoonka iyo ilaalada.
3. U hanqal taagga madaxdan ee Xamar iyo damaca weyn ee Villa Xalane ka hayay oo runtii dhaayahooda ba Puntland ka jeediyay oo danaheedii baylaha ka yeelay.
4. Fiiragaabnida madaxda Puntland ee daaha ka saartay garashada xoojinta ismaamulka hoose ee gobolladeeda iyo degmooyinkeeda si ay bulshadu kalsoonida ugu dhisanto oo ay nacab ku dhex dhuunta qummmati uga hor istaagto.
Akhyaarta qiilka ka dhigaysa in aanay Puntland hanti ku filan haysanin anigu kuma raacsani waayo haddii ay madaxda Puntland dakhliga soo gala waxsoosaarka dib ugu maalgalin lahaayeen haddeer maaliyaddeedu heer aad u sarreeya ayay mari lahayd.
(waan sii wadayaa)
Waxaa ka mid ahaa tallaabooyinka kobcinta dhaqaale ee ku waajibkaa in:
1. La dhiso waddooyin tayo leh ee isku wada xidhaya degmooyinka Bariga ilaa Sanaag ee ku sii daraya waddooyinka kale ee halbowlaha ah ee Nugaal, Karkaar iyo ilaa Mudug. Ganacsiyada ayaa badan lahaa oo baahi lahaa oo dakhli badan laga kasban lahaa.
2. Buuraha Bari iyo Sanaag laga taago qalabyada casriga ee tamarta ilayska lagu dabo oo lagu keydiyo oo deeto inta lagu tallaalo jariidka qaran (national grid) dagalka lagu baahiyo si dadku koronto u wada helaan. Wax badan ayay nolosha iyo dhaqaalaha Puntland ku soo kordhin lahayd oo horumarka horseedi lahayd.
3. Warshaddii milixda dib loo furo oo ay Puntland dalka intiisa kale milixda ka iibiso. Waxaa si sahlan loogu fulin kari lahaa iskaashi maalgashineed oo dhex mara dowladda Puntland iyo maalqabeennada reer Puntland ee dunida daadsan. Hanti badan baa ka soo xaroo lahayd.
Halkan kuma soo koobi karo aan qorshooyinka ay fursadahoodu Puntland u furnaayeen ee maanta heer sare ku joogi lahayd xaqiiqdii. Puntland hanti way ku fadhidaa ee hoggaankii u bidhaamin lahaa ayay la’dahay.
Alle ha u naxariisto gudoomiyaha Nugaal iyo intii kale ee xaqdarada lagu dhiley. Hada ayaan ku baraarugay warkaan
Anigu waxaan aaminsanahay in ay argagixisadu ka hesho garab iyo gargaar qaybo ka mid ah shicibka puntland.
Argagixisadu cirka kama soo dagtu. Waxay ku nool yihiin guryaha reer puntland. Inta aanu cid kale eegin ama farta ku fiiqin aanu guryaheena sifayno. Shaqadaasna waxay u taal Deni iyo xukumadiisa.
Ninka reer puntland ah ee argagixisada garabka siiya hadii aan la toogan guul lagama gaarayo sharwadayasha kufriga ah.
Shaqsigaan daalimka ah waxuu ku noolaa guri ka mid ah guryaha garoowe. Ugu yaraan toban qof oo kale ayaa garab iyo gargaar siineysey. Magaca Shabaab cidkasta ayaa ku qaraabata.
RABBI Hau naxaristo gudoomiyihi g.nugaal gujir inta ku dhaawacantayna rabi haka caafiyo.xukuumadana waji cusub ayaa laga rabaa hadi kale booska ha baneyso dad buuxinkara ayaanu haynaaye.